Zvakanakisa zvekushongedza imba zvinhu zviri pasi pe500 Rupees
Kushongedzwa kwemba kwakakosha nekuti kunokanganisa kuzviona-kugadzirira. Saka, enda kumberi, tenga mutsva mutsva kana hunyanzvi kana uchifarira nezvazvo. Hauzvibate, unogadzira nharaunda maunogona kuve yakanakisa vhezheni!
Yakanakisa laptop bag yekufamba nendege
Isu tinoziva kuti haudi kuve munhu anotakura mikwende mizhinji. Ndiyo nzvimbo yekushandisa mabhegi epamhepo. Zviri nyore kutakura bhegi rakakodzera remafoni ekufamba. Inofanirwa kuve yakakwana zvakakwana kutsvedza
Yakanakisa hutachiona hwekusimudzira zvinhu muIndia
April 28, 2022 Demi India, zvinhu zvekutenga
Kudyisa muviri wako kunogona kubatsira kuchengetedza immune system ine hutano. Kana iwe uchitsvaga nzira dzekudzivirira dzihwa, furu, uye zvimwe zvirwere. Ronga chikafu chako nevanokurudzira vakasimba ve immune system. Yakanyanya kusadzivirirwa inosimudzira zvinhu muIndia
Best office chair yebasa kubva kumba
April 28, 2022 Shubham Sharma India, zvinhu zvekutenga
Worf Kubva Kumba (WFH) chinhu chitsva mazuva ano, anenge ese mushandi wemakambani eIT ari kuita wfh mazuva ano. Munguva yewfh, vazhinji vedu takaneta nyore nyore sezvo tisiri kushandisa chigaro chakakwana kana tafura panguva